🥇 ▷ Huawei Mate 30 RS Porsche Design ayaa hadda ku jira internetka! ✅
Huawei Mate 30 RS Porsche Design ayaa hadda ku jira internetka!
Telefishinka casriga ah ee ‘Huawei’ ee jiilkii ugu dambeeyay ee Mate ayaa maanta laga bilaabi doonaa magaalada Munich ee dalka Jarmalka, waa dhacdo aan ku raaci doonno goobta. Hadda, saacado kahor intaan la bilaabin, Evan Blass wuxuu wadaagay muuqaalka sanduuqa sawirka Mate 30 RS Porsche Edition.
Muuqaalka waxaan ka arki karnaa in taleefanka casriga ah la yimaado lacag qaali ah oo raadisa kiis Matte Black. Gudaha waxaa ku yaal Mate 30 RS Porsche Design casriga ah. Sidoo kale waa cidhib dhabarka adag oo isla midab ah sida casriga ah. Waxaan sidoo kale helnay xarkaha darbiga, fiilada macluumaadka, madaxa madaxa iyo xamuulka gawaarida. Dhammaan agabyada lagu daro sanduuqa waa madow.
Bixinta dhawaan ee ‘Mate 30 RS Porsche Design’ waxay muujineysaa in taleefankan casriga ah uu leeyahay gadaal gadaal kaameeraha ah. Si kastaba ha noqotee, halkii ay ahaan lahaayeen wareeg wareeg ah oo ku yaal Mate 30 Pro, dareemayaasha kaamerada ayaa lagu habeeyay meel dhuuban oo dhuuban oo ka socota kor ilaa hoos. Iftiinka LED-ga waxaa la dhigayaa geeska bidix ee kore. Taasi waa, ka baxsan kiiska kamaradda.
Iyada oo ay weheliso sanduuqa sawirka taleefanka casriga ee xiga, Evan Blass wuxuu sidoo kale la wadaagayaa abaalmarino cusub oo ah Mate 30 RS Porsche Edition laba doorasho midab – madow iyo casaan. Dhanka shaybaarka, sida Mate 30 Pro, waxaan fileynaa in daabacaadda Porsche Design ay kuxirantahay Kirin 990 chipset iyo qaddarka 90Hz ee AMOLED.
Sida ay sheegayaan wararka xanta ah, Huawei Mate 30 Pro waxaa ku shaqeyn doona batari 4,500mAh ah oo leh 40W taageero deg deg ah iyo taageero dhan 24W SuperWireless charging. Waxaa sidoo kale la filayaa inuu la yimaado 8 GB / 12 GB RAM iyo kaydinta 512 GB.
Aaladda ayaa sidoo kale la rajaynayaa in lagu siiyo qiimeynta IP68 ee biyaha iyo caarada iska caabbinta. Labadaba waxaa laga filayaa inay taleefanno casri ah ku qalabaysan yihiin EMUI 10 interface oo ku saleysan nidaamka hawlgalka cusub ee Android 10.
Sida kuwii ka horreeyayba, waa qalab qaali ah oo sidaas darteed yeelan doona sumad qiimo sare leh.
EMUI 10 – Huawei sharad ku saabsan Total Dark Mode iyo in ka badan!